ငံ့လင့်နေသည်မှာကြာပြီ – မြန်မာသတင်းစုံ
ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိကွန်ဒိုမီနီယံ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခု။ ထိုအဆောက်အဦးကြီး၏ ၁၀ လွှာတွင် ခေါတ်မှီ နောက်ဆုံးပေါ်ကရိယာများဖြင့် လှပခမ်းနားသော အလှပြင် ဆိုင်ကြီးတစ်ခု တည်ရှိနေသည်။ အလှပြင်ဆိုင်က အမျိုးသမီးများသီးသန့်ဟု ဆိုသော်လည်း အလှပြင်ပေးသူများက အသက် နှစ်ဆယ် ကျော်သာရှိသေးသော ကောင်လေးများဖြစ်နေသည်။ အလှပြင်ဆိုင်ဟု ဆိုသော်ငြားလည်း အလှပြုပြင်ပေးသူများမှာ အလှပြင်ဆိုင်အများစုတွင် တွေ့ရသော မိန်းမစိတ်ပေါက်နေသော ကောင်လေးများ မဟုတ်ပါ။ ယောက်ျားစစ်စစ် ကျားဖြစ်ပြီး ဝတ်တာစားတာက အစ ယောက်ျားပီသသော သူများဖြစ်သည်။ အားလုံး တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့်လေးတွေ ချည်းဖြစ်သည်။ အလှပြင်ထိုင်ခုံက ၇ ခုံရှိပြီး ကောင်လေးတွေက အားလုံး စုစုပေါင်း ဆယ် ယောက်ဖြစ်သည်။ အလှပြင်ခန်းကို သီးခြား မှန်လုံခန်းဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားပြီး ထိုအခန်းထဲတွင် ဆိုဖာနောက်မှီ ထိုင်ခုံရှည် သုံး ခုံကို နံရံတွင်ကပ်၍ စီတန်းချထား ပြီး။
အလှပြင်ဆရာ ကောင်လေးများ ထိုင်နေကြသည်။ ဂျာနယ်ဖတ်သူကဖတ်၊မှန်ရှေ့တွင်ခေါင်းဖီးသူကဖီး၊ စကားပြောသူကပြောနှင့် ရှိသော်လည်း ကျယ်လောင်ဆူညံခြင်းမရှိပဲ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းလှသည်။ ထိုအလှပြင်ခန်း၏ အပြင်ဖက်တွင်တော့ တန်ဖိုးကြီးလှသော ဆိုဖာဆက်တီ နှစ်စုံဖြင့် ဧည့်ခန်းကိုဖွဲ့စည်းထား သည်။ ထိုဧည့်ခန်းနှင့် အလှပြင်ခန်းအကြား အလှပြင်ခန်းသို့ ဝင်ပေါက်နားတွင်တော့ ကောင်တာပုံ စားပွဲတစ်ခုဖြင့် အသက် ၃၀ ခန့်အရွယ် တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ချောမောလှပသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ထိုင်နေလေ၏။ နေ့ လည်ဘက်မို့လားမသိ လူကရှင်းနေလေသည်။ ဧည့်ခန်းဆိုဖာဆက်တီတွင်ဧည့်သည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိုင်နေသည်။အသက်က ၃၀ ကျော်လောက် အသားဖြူဖြူနှင့် ထိုင်နေတာတောင် သူမ၏ကိုယ်လုံး အလှက ပေါ်လွင်လှသည်။ ထိုဧည့်သည် အမျိုးသမီးသည် လက်ထဲမှ အမျိုးသမီး မဂ္ဂဇင်းကိုဖတ်ရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် အလှပြင်ခန်းဖက်ကို လှမ်း၍ကြည့်သည်။
အလှပြင်ခန်း ထဲတွင်တော့ တစ်ယောက်မှ အလှပြင်နေခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ငြားလည်း လှမ်းလှမ်းကြည့်နေသော အမျိုးသမီးက တစ်ယောက်ယောက်ကို လှမ်းမျှော်နေပုံရသည်။ သူမ၏ရှေ့တွင် စားပွဲပေါ်၌ အချိုရည် သံဗူးတစ်ဘူးနှင့် ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရှိသည်။ ဖန်ခွက်ထဲမှ အချိုရည်က ဖင်ကပ် မျှသာ ကျန်တော့သည်။ အမျိုးသမီးသည် လက်ထဲမှ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို စာပွဲပေါ်သို့ တင်လိုက်ပြီး အလှပြင်မှန်ခန်း ဘက်သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ “ အင်း… တနာရီတောင် ကျော်လာပြီ ” တိုးတိုးလေးငြီးလိုက်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်သည်။ ပြီးမှ မျက်နှာက ပြုံးယောင်သန်းသွားပြီး ရှေ့စားပွဲပေါ်မှ စာအုပ်ကို လှမ်းယူလိုက်သည်။ မကြာလိုက်ပါချေ။ စကားပြောသံကြား၍ အမျိုးသမီးသည် စာအုပ်မှမျက်နှာလွှဲကာ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ အသက် ၄၀ ခန့် ခပ်ဝဝ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အလှပြင်မှန်လုံခန်း၏ အတွင်းဖက်ရှိ တံခါးမှ ဝင်လာ၍ အလှပြင်ခန်းကို ဖြတ်လျှောက်လာသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။
ဧည့်ခန်းထဲတွင် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးသည် လက်ထဲမှ စာအုပ်ကိုချလိုက်သည်။ အလှပြင်ခန်းကို ဖြတ် လျှောက်လာသော အမျိုးသမီးကြီးသည် အလှပြင်ခန်းဝင်ပေါက်သို့ ရောက်လာသောအခါ ကောင်တာတွင် ထိုင်နေ သော ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် အမျိုးသမီးက မတ်တတ်ထ၍ နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ “ အဆင်ပြေရဲ့လား…မမ ” “ ပြေပါတယ်ညီမရယ်…ဒါကြောင့်လဲညီမတို့ဆီကို မမက တပတ်တစ်ခေါက်တော့ ရောက်အောင်လာတာပေါ့” ပြောလိုက်ရင်းလျှောက်လာသောအမျိုးသမီးကြီးသည် စောင့်နေသောအမျိုးသမီး၏ဘေး ဆိုဖာပေါ်တွင်ဝင် ၍ ထိုင်ချလိုက်သည်။ “ လူကို နုံးသွားတာပဲ…ဟင်း ဟင်း ဟင်း ” “ မမစန်း ကလဲ ” “ ဟုတ်တယ်…မချိုရ… ကောင်လေးတွေက ဝန်ဆောင်မှု တအားကောင်းတာ… ညီမလဲ ဝင်လိုက်ပါလား” “ ဟာ… မမစန်း ကလဲ ” စောစောက ထိုင်စောင့်နေသော မချိုဆိုသည့် အမျိုးသမီး မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရဲသွားလေသည်။
ကောင်တာမှ အမျိုးသမီးက အအေးအချိုရည် သံဗူးနှင့်ဖန်ခွက်က်ို လင်ဗန်းဖြင့်တင်၍ကိုင်ကာ အနားရောက်လာသည်။ “ ကဲ…မချို …မူလကျီ လုပ်မနေနဲ့… ထ ထ… ဒီရောက်မှတော့တစ်ခါလောက်ဝင်ကြည်လိုက်စမ်းပါအေ..” “ အဲဒီ မမစန်းကလဲ… ” “ ဘာလဲ…ဒီက အမလေး လည်း ဝင်ဦးမလို့လား…လာလေ…” ကောင်တာမှ အမျိုးသမီးက အအေးဗန်းကို စားပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီး မချိုဆိုသော အမျိုးသမီး၏လက်ကို လှမ်း၍ ကိုင်လိုက်သည်။ “ ကဲပါ…ထပါအေ…မချိုကလဲ…ရောက်မှတော့ မထူးပါဘူး ” မမစန်းဆိုသော အမျိုးသမီးကြီးကလည်း မချိုဆိုသော အမျိုးသမီး၏ လက်တဘက်ကို ကိုင်ကာ ဆွဲထူလိုက် သည်။ “ အာ… မမစန်းကလဲကွာ…လုပ်ပြီ.. ” မချို ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့် ထ၍ မတ်တပ်ထရပ် လိုက်သည်။ “ ကဲ…ညီမရေ…ဒီကမချိုကိုလည်း မမလိုပဲသဘောထားပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါကွာ ” မမစန်းဆိုသော အမျိုးသမီးကြီးက ပြောလည်းပြော စလင်းဘက်ထဲမှ ငွေတစ်သောင်းငါးထောင်ကိုလည်း ထုတ်ယူ၍ ပေးလိုက်သည်။
ပြီးတော့ မမစန်းကပြောလိုက်သေးသည်။ “ စက်ရှင်ပဲ နော် ” “ဟုတ်ကဲ့…မမ” ကောင်တာမှ အမျိုးသမီး ခေါ်ရာနောက်သို့ မချို ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် ပါသွားသည်။ မမစန်းဆိုသော အမျိုး သမီးကြီး၏ အမည်က ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်မြင့် ဖြစ်သည်။ မချိုဆိုသော အမျိုးသမီး၏ အမည်က ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးက ငွေကြေးသုံဖြုန်းနိုင်သော လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြသည်။ မမစန်းက အသက် ၄၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကာ မုဆိုးမဖြစ်သည်။ မချို က အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည်ဖြစ်သူက အမေရိကားတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေသည်မှာ ၃ နှစ် ခန့် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဒီတော့နှစ်ဦးစလုံး လိုအပ်ချက် တူညီနေသူတွေဖြစ်သည်။ မမစန်းက ဒီနေရာကို မကြာခဏ လာတတ်ပြီး မချိုကို ရောက်ဖူးအောင် လိုက်ခဲ့ပါလားဟု ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်တာမှ အမျိုးသမီး လက်ဆွဲခေါ်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါလာသော မချိုသည် အလှပြင်ခန်းအတွင်း ဖြတ်လျှောက်လာပြီး။
တဖက်ရှိ အလှပြင်ခန်းတံခါးပေါက် အနီးသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုနေရာတွင် ဆိုဖာထိုင်ခုံရှည် နှစ်ခုဖြင့် ကောင်လေးတွေ ထိုင်နေကြသည်။ ထိုနေရာသို့အရောက် ကောင်တာမှ အမျိုးသမီးက ရပ်၍ မချိုလည်း ရပ်လိုက်သည်။ “ ကဲ…မမ…ဒီမှာအားလုံး ၈ ယောက်ရှိတယ်…မမ အကြိုက်ရွေးပေတော့.. ” ရဲကနဲဖြစ်သွားသော မျက်နှာလေးဖြင့် မချိုက ကောင်လေးတွေကိုကြည့်သည်။ အားလုံး ကိုယ်လုံးတောင့် တောင့်နှင့် ရုပ်ချောချောလေးတွေ။ အားလုံး၏ သန်စွမ်းမှုကလည်း အတူတူလောက်ပင်ဖြစ်နိုင်၍ မချိုဘယ်သူ့ကို ရွေးရမှန်း မသိဖြစ်နေသည်။ “ ဒီဖက်က နှစ်ယောက်ကတော့ တပတ်မှတခါပဲလာတဲ့ အချိန်ပိုင်းတွေလေ… ဟိုဖက်က ၆ ယောက်ကတော့ ဒီက ပင်တိုင်တွေပေါ့ ” မချို တခါတလေမှ လာသည်ဆိုသော ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်သည်။ မချို၏စိတ်ထဲတွင် ပင်တိုင် ၆ ယောက်က နောင်လည်း အချိန်မရွေးတွေ့နိုင်သည်။
တခါတလေမှ လာသောနှစ်ယောက်က ကြုံတွေ့ရခဲ၍ ထိုနှစ်ယောက်ထဲမှ ရွေးရန်ကြံစည်လိုက်သည်။ တစ်ယောက်က အသားလတ်လတ် တယောက်က အသားဖြူဖြူ၊ နှစ်ယောက်စလုံး လုံးတူဒေါက်တူမို့ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ၏ မျက်လုံးက ထိုကောင်လေးနှစ်ယောက်၏ ခြေမများဆီသို့ ရောက် သွားသည်။ “ သူနဲ့ပဲသွားမယ် ” အသားလတ်လတ်ကောင်လေးက မချိုကို ပြုံး၍ကြည့်ရင်း မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည်။ “ ကာစန်မာ စိတ်ချမ်းသာဖို့က အဓိကနော် ” “ ဟုတ်ကဲ့ မမ ” ကောင်တာမှ အမျိုးသမီး၏ သတိပေးစကားကို ကောင်လေးက ခေါင်းညိတ်၍ တုံ့ပြန်လိုက်သည်။ ကောင် တာမှ အမျိုးသမီးက နံရံအပေါ်ဖက်တွင် ကပ်ထားသော မှန်ဘီရိုလေး၏ တံခါးကိုလှမ်း၍ ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ နံပါတ်ပြား ချိတ်ဆွဲထားသော သော့တစ်ချောင်းကို ဖြုတ်ကာ ကောင်လေးလက်ထဲသို့ ထည့်ပေးလိုက်သည်။ “ အခန်း ၇ ကို သွားတော့ ” ကောင်လေးကရှေ့က မချိုကနောက်က အလှပြင်ဆိုင်မှန်လုံခန်း၏ နောက်ဖက်တံခါးမှနေ၍ အထဲသို့ ဝင်လာ ခဲ့သည်။
ကောင်တာမှ အမျိုးသမီးကတော့ နေခဲ့သည်။ အထဲတွင် တည်းခိုခန်းများကဲ့သို့ နံပါတ်တပ်ထားသော အခန်းများ အစီအရီရှိနေသည်။ နံပါတ် ၇ တပ်ထားသော အခန်းကို ကောင်လေးက သော့ဖွင့်လိုက်သည်။ “ ဝင်လေ…မမ ” မချိုကရှေ့က ကောင်လေးက နောက်မှ အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်ပြီး ကောင်လေးက အခန်းတံခါးကို သော့ခတ်၍ ပိတ်လိုက်သည်။ အခန်းက ၁၅ ပေပက်လည်လောက် ရှိမည်ထင်သည်။ အလယ်တွင် တစ်ယောက်အိပ်လည်းမက နှစ်ယောက်အိပ်လည်းမကျသော ဇက ကုတင်တစ်လုံးပေါ်တွင် မွေ့ယာထူကြီးတစ်လုံးနှင့်အိပ်ယာကို ခမ်းခမ်းနားနား ပြင်ဆင်ထားသည်။ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူက ကုတင်စောင်းတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ကောင်လေးက သူ့အင်္ကျီကိုချွတ်၍ နံရံမှချိတ်တွင် ချိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မချိုဘေးကုတင်စောင်းတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်ကထဲက ကောင်လေးကို ငေး၍ကြည့်နေသော မချိုက ကောင်လေးကိုဖက်၍ ပါးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရ နမ်းလိုက်သည်။
ကောင်လေးက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် မချို၏ခါးကို ဖက်ထားရင်း တင်သား တစ်ဖက်ကို ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ “ မင်းနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ ” “ ဇော်ဇော် လို့ပဲခေါ်ပါ မမ ” “ အင်းလေ နာမည်ရင်းကိုတော့ ဘယ်ပြောပါ့မလဲ…မမ နံမည်က နံမည်အမှန်နော်… မချိုလို့ခေါ်တယ် ” “ ဟုတ်ကဲ့…မမ…ကျွန်တော် အဝတ်တွေ ချွတ်ပေးမယ်နော်… ” “ ဇော့်…သဘောပဲ… ” ဇော်ဖော်က မချိုကိုအားဖြင့် ညှစ်၍ဖက်ကာ ပါးနှစ်ဖက်ကို နမ်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ မချို၏အင်္ကျီကို ဖြေးဖြေး ချင်း ချွတ်ပေးရင်း ထွက်ပေါ်လာသော အသားစိုင်လေးများ ပခုံးသားလေးတွေက အစ နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိ၍ဖိ၍ စုပ်ကာ နမ်းပေးသည်။ နမ်းရင်း ချွတ်ရင်းဖြင့် နောက်ဆုံး အောက်ခံ ဘရာစီယာပါ ကျွတ်သွားသော အခါတွင်တော့ လုံးဝန်း သော နို့အုံနှစ်လုံးက အိတွဲတွဲလေး ထွက်ပေါ်လာသည်။ နို့အုံသားလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိလိုက် ညှပ်လိုက် စုပ်လိုက်ဖြင့် နမ်းပေးရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့ ပေးလိုက်သည်။
ထိုသို့ နို့သီးလေးတွေကို စုပ်ပေးနေသော အချိန်တွင် နို့အုံကိုလည်း လက်ဖြင့် အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ချေပေးနေသည်။ မချိုရင်ကိုကော့ပြီး မျက်နှာကိုမော့ကာ မျက်လုံးတွေက စင်းပြီးမှိတ်နေသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဇော်ဇော်၏ လည်ပင်းကိုဖက်ကာ သူမ၏ ရင်ဘတ်တွေကို အတင်းကပ်၍ ပေးနေသည်။ နို့နှစ်လုံးကို စေ့ငှအောင် စို့ပေးပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ဇော်ဇော်က မချို၏ခါးကိုပွေ့ကာ ပက်လက်လှန်ပေးရင်း အနည်းငယ်မျှ စူထွက်စပြုနေပြီဖြစ်သော ဗိုက်သားများကို နမ်းရင်း ထဘီကိုအောက်သို့ ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ထဘီ က ချက်အောက်ရောက်သွားတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီကြိုးက ပေါ်လာသည်။ ဇော်ဇော်က ထဘီကို ချေဖျားဘက် မှနေ၍ ကွင်းလုံးချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး မချို၏ကြိုးတပ် ခွထောက်ပါ ဘောင်းဘီကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်၏။ အဝတ်တွေ အားလုံး ကျွတ်သွားသောအခါ အမွှေးထူထူဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက ခုံးခုံးကြီး ထွက်ပေါ်လာလေ သည်။
ဆီးခုံမှ အမွှေးစပ်လေးများအထိ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိကပ်နမ်းစုတ်ပြီး ပေါင်လုံးကြီးတွေကိုပါ နမ်းသည်။ လက်တစ် ဖက်က စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ်အုပ်၍ အမွှေးတွေကို ထိုးဖွရင်း ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေသည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြားမှ စောက်ရည်ကြည် ကလေးများ စိမ့်ပြီးထွက်ပေါ်လာတာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ မမ…ကျွန်တော် မှုတ်ပေးရမလား… ” “ အင်း ” “ မုန့်ဖိုးပေးရမယ် နော် ” “ ပေးမှာပေါ့…ပြီးအောင်တော့ မမှုတ်နဲ့နော် ” “ ဟုတ်ကဲ့ပါ ” ဇော်ဇော်က မချို၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကား၍ ထောင်ကာ ပေါင်ကြားသို့ မျက်နှာအပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လျှာကိုအပြားလိုက်ထုတ်၍ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို အောက်မှနေ၍ အပေါ်သို့ပင့်ကာ သုံးလေးကြိမ်မျှ ယက်တင်လိုက်သည်။ “ အ…အ…ဟင်း…ဇော်ဇော်ရယ်…မောင်လေးရယ်… ” မချို အသံထွက်အောင်ပင် ငြီးလိုက်ရသည်။ ပြူးထွက်နေသော စောက်စိက လျှာဖြင့်ဒရွတ်တိုက် ပွတ်တိုက် သည့် ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပေ။
ဇော်ဇော်က စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်မနှစ်ဘက်ဖြင့် အသာဖိဖြဲလိုက်သည်။ အမှန်က စောက်စိကို ဆက်၍စုပ်ပေးရန် ဖြစ်သော်လည်း ဒါက မှုတ်တာနှင့် ပြီးချင်သူများ အတွက်သာဖြစ်သည်။ အခု မမက ပြီးအောင် မလုပ်ပေးရန် မှာထားသည်ကို သတိရသောကြောင့် စောက်စိကို ဆက်မစုပ်ပေးတော့ ပဲဖြဲထား၍ ပြဲနေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြားသို့ လျှာကိုထိုးသွင်းကာ ပတ်လည်လှည့် ယက်ပေးလိုက် သည်။ လျှာကိုနက်သ ထက်နက်အောင် အထဲသို့ ထိုးသွင်းခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ စောက်ပတ်တွင်းဝ အတွင်းနားလေးကို သာ ယက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အံကြိတ်၍ ဝမ်းခေါင်းသံဖြင့် တ အင်း အင်း ငြီးရင်း မချို၏ပေါင်ကြီးတွေက ပေါင်ကြားမှ ဇော်ဇော်၏ခေါင်းကို ညှပ်လိုက်ခွာလိုက် ဖြစ်နေကြသည်။ တခဏအတွင်းမှာပင် စောက်ပတ်ထဲမှ တဖြေးဖြေး စိမ့်ထွက်လာသော အရည် ကြည့်များမှာ ပျစ်လာသည်ကို လျှာဖျားမှတဆင့် သိရှိလိုက်ရသည်။
ဇော်ဇော်က စောက်ခေါင်းထဲမှ လျှာကိုဆွဲထုတ် လိုက်ပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကို ခပ်ဖွဖွလေး ယက်ပေးကာ သူ၏ခေါင်းကို ကြွလိုက်သည်။ “ အင်းဟင်းဟင်း…မောင်လေးရယ်…မောလိုက်တာကွယ် ” “ နားဦးမလား…မမ ” “ ခဏနားပါရစေဦး မောင်လေးရယ်… နိုမို့ဆို ထည့်လည်းထည့် ပြီးလည်းပြီး ဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့ပါ…နော် ” ဇော်ဇော် ကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ အခန်းထောင့်ရှိ ရေခဲသေတ္တာလေးထဲမှ ရေသန့်ဘူးကို ဖောက်၍ ဖန်ခွက်ထဲ ထည့်ကာ ယူလာပေးသည်။ “ မမ…သောက်လိုက်ပါဦး ” “ အင်း…မင်းလဲ သောက်ဦးလေ ” ဇော်ဇော်ဆိုသော ကောင်လေးက ခေါင်းညိတ်ပြသည်။ မချိုက ရေသောက်ပြီးတော့ ဖန်ခွက်ကို ပြန်ယူသွားပြီး သူလည်း ဖန်ခွက်တစ်ဝက်လောက် ရေထည့်သောက်သည်။ အဝတ်အစားကင်းမဲ့၍ ဝတ်လစ်စလစ် ဖြစ်နေသူက ဒေါ်ချိုချုမိုးသူ။ သူမ၏ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းလှပသည့် ခန္ဓာကိုယ်အား ဇော်ဇော့်မျက်လုံးများက သာမန် အကြည့်ဖြင့် သာ ကြည့်သော်လည်း။
မချိုကမူ ယခုအချိန်အထိ ပုဆိုးဝတ်ထားဆဲဖြစ်သော ဇော်ဇော်ဆိုသော ကောင်လေးကို မပြတ်ကြည့်နေမိသည်။ “ မမ…လုပ်ရတော့မလား… ” “ အင်း လေ ” “ မမ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို အကြိုက်ဆုံးလဲ… ” “ နေဦး…မင်းဟာကို ကြည့်ချင်သေးတယ် ” ဇော်ဇော် က ခါးမှပုဆိုးကိုချွတ်၍ ကုတင်ခြေရင်းဖက်ရှိ ကုတင်တိုင်ပေါ်သို့ ပစ်တင်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက် ပေါ်ထွက်လာသော လီးကြီးက အရွယ်နှင့်တောင် မမျှဟုပြောရမလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ အရှည်က ၆ လက်မအောက် ကျမည့်ပုံမရှိပေ။ လုံးပတ်က လက်တစ်ကိုင် ပြည့်ပြည့်ခန့်။ လီးကြီးက တောင်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း သိပ်ပြီးတော့ မာသေးပုံမရ။ “ မမ…ကိုင်ချင်ရင် ကိုင်လေ ” ဇော်ဖော်က ပြောရင်း ကုတင်ဘေးသို့ ကပ်ပေးသည်။ မချိုလည်း အိပ်ယာပေါ် ပက်လက်အနေအထားမှ ဇော်ဇော် ရှိရာဘက်သို့ စောင်းပြီး လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လီးကြီးကို လှမ်းဆုပ်လိုက်လေသည်။
လီး၏နွေးထွေးသော အပူငွေ့က သူမလက်ဖဝါးသို့ စီးဝင်သွားခိုက် စောက်ပတ်ဝမှ စစ်ကနဲ ခံစားလိုက်ရသဖြင့် မချိုပေါင်နှစ်လုံးကို လိမ် ထားလိုက်ရလေသည်။ ခပ်ဖြည်းဖြည်း ဂွင်းတိုက်ပေးနေရာမှ လီးက စံချိန်တင်အောင် မာတင်းလာပြီး အကြောကြီး တွေက အပြိုင်းပြိုင်း ခုံး၍ထလာသည်။ “ လာ…မောင်လေးရယ်… မမကို ဒီကုတင်စောင်းမှာပဲ လုပ်ပေးပါ ” မချိုက လီးကိုကိုင်ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်၍ အလုပ်စရန် ပြောလိုက်ပြီး လီးကိုလက်မှ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်အား ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ်အိပ်ရင်း တင်သားကြီးများကို ကုတင်စောင်းတွင်တင်ကာ ပေါင် ကား၍ ခြေနှစ်ချောင်းကို ကုတင်အောက်သို့ ချလိုက်၏။ ဇော်ဇော်က သူမပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်ရပ်လိုက်ရင်း စောစောက ရေသောက်စဉ် နံရံတွင်ချိတ်ထားသော အင်္ကျီအိတ်ထဲမှ ယူလာပုံရသော ကွန်ဒုံးကိုဖောက်၍ လီးတွင်စွပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ရှေ့သို့တိုးကပ်လိုက်ပြီး လီးတန်တစ်ခုလုံးကို။
မချို၏ အမွှေးထူထူဖြင့် ခုံးထနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ်သို့ အလျှားလိုက်တင်ကာ ရှေ့တိုး နောက်ငင်ဖြင့် အမွှေးတွေကြား ထိုးသွင်း ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ “ ဟင်း…ဟင်း…ဟင်း…ယားတယ်…ဟင်း… ” စောက်ဖုတ်အုံပေါ်မှ လီးတန်ကြီးကို လျှောကနဲ နောက်သို့ဆုတ်လိုက်ပြီး စောက်စေ့ ပြူးပြူးကြီးကို လီးထိပ် ဖြင့် နှစ်ချက်မျှထိုးကာ စောက်စေ့ပေါ်သို့ လီးထိပ်ဖျားကိုတင်၍ ပွတ်သပ်ထိုးဆွနေသည်။ တဟင်းဟင်း ငြီးငြူမည် တမ်းရင်း မချိုတစ်ယောက် ဖင်ကြီးတွေ ကော့ကော့တက်လာသည်။ လီးထိပ်ကို စောက်စေ့အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်ပြီး စောက်ခေါင်းဝသို့ တေ့ကာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိ၍ညင်ညင်သာသာ ဆက်တိုက်သွင်းလိုက်သည်။ မချို၏ မေးဖျားလေး မော့တက်သွားပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာမှာ ဟ၍သွားသည်။ အလိုးမခံရသည်မှာ ၃ နှစ်ကြာခဲ့ ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် သူမစောက်ခေါင်းက စေးကပ်ကျဉ်းမြောင်းနေသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ လီးကြီးက တဖြည်း ဖြည်း ထိုးခွဲဝင်ရောက် လာသောအခါ။
လီးကိုငံ့လင့်နေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော စောက်ပတ်အတွင်းသား ကြွက်သား မျှင်များက အလုအယက် ဝိုင်းဝန်းဆွဲယူကြသည်။ အရည်ကြည်များကလည်း ဆက်တိုက် စိမ့်ထွက်လာကြသည်။ အလိုလိုနေရင်း မချို မောနေလေသည်။ ဇော်ဇော်က လီးကိုတဝက် သာသာလောက်သာ ထုတ်၍ လေးငါး ကြိမ်မျှ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဆောင့်လိုးပြီးမှ နို့တစ်ဖက်ကို လက်ဖြင့်လှမ်း၍ နယ်ရင်း လီးကို တဆုံးတဆုံး ထုတ်၍ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို အတင်းမှိတ်ရင်း မချို၏ဦးခေါင်းမှာ ရမ်းခါနေသည်။ ဇော်ဇော် လိုးတာ က ပညာသားပါသည်။ လီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ သမားရိုးကျ ပုံမှန်အတိုင်း လိုးသွင်းနေခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ ခါးကိုအသုံးချကာ လီးကို ဘေးဘယ်ညာ စောင်း၍တမျိုး အပေါ်သို့ကော့၍တဖုံ အောက်သို့စိုက်၍တခါ လေးဘက်လေးတန် ပြည့်စုံအောင် တဆုံးတဆုံးထုတ်၍ ခပ်နာနာ ဆောင့်လိုးပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူမှာ ရင်ဘတ်ကော့တက်လာလိုက် ကုတင်စောင်းမှ ဖင်ကြီးတွေ ကြွတက်လာလိုက်ဖြင့် တကိုယ်လုံး ယောက်ယက်ခပ်လျက် တခါဘူးမျှ မကြုံဖူးသည့် အရသာကို ဖြတ်ဖြတ်လူး ခံစားနေရသည်။ “ ဖွတ်…ဇွတ်…ပလွတ်…ကျွတ်…ကျွတ်…ကျွတ်…ဟင်း…ဟင်းဟင်..ကျွတ်ကျွတ် ” ဇော်ဇော်၏လက်က နို့နှစ်လုံးကို အလွတ်မပေး မနားတမ်းညှစ်လျှက် လီးကလည်း အားပါပါဖြင့် ခပ်သွက် သွက် မနားတမ်းဆောင့်လျှက် ဒရစပ်လိုးလိုက် ခပ်ဖြေးဖြေးလေး မှေးဆောင့်လိုက်ဖြင့် သူ၏စိတ်ကို ထိန်းကာ ပညာသားပါပါ လိုးပေးလျှက်ရှိသည်။ မခံရတာကြာပြီဖြစ်သော ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူမှာ ခပ်စောစောကလည်း ဇော်ဇော် ဘာဂျာ မှုတ်ထားသောအရှိန်ဖြင့် ပြီးချင်စိတ်မှာ ပြင်းပြ၍လာသည်။ တကိုယ်လုံးလဲ ဆိမ့်တက်လာလေသည်။ နောက် တစ်ချီကျမှ လေးဖက်ကုန်း၍ အချိန်ကြာကြာလေး အားရှိပါးရှိခံတော့မည်ဟု မချိုတွေးလိုက်သည်။ “ ဇော်… ဇော်…မမပေါ် မှောက်… မှောက်ချလိုက်.. ” ဇော်ဇော်တို့က ကျွမ်းပြီးသားပါ အမျိုးသမီး ပြီးတော့မည်။
သူမအပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်တော့ အမျိုးသမီးက အတင်းကြုံး၍ ဖက်ထားသည်။ ဇော်ဇော်က မချို၏ ဘယ်ဖက်နို့ကိုငုံ့၍ အားဖြင့်စုပ်ကာ စို့ပေးရင်း သူ၏အားပါသော ဆောင့်ချက်များကို အမြင့်ဆုံး အရှိန်သို့တင်ကာ အပြင်းထန်ဆုံး ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ “အီး…အ…အမလေး…အား…ကျွတ်ကျွတ်…ကျွတ်…ဟင်း…” မချို၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးမှာ တောင့်ကနဲ ကော့တက်သွားပြီး ဆတ်ဆတ်ခါသွားသည်။ ပြီးဟင်းခနဲ သက်ပြင်းချကာ ငြိမ်ကျသွားတော့မှ ဇော်ဇော်က သူ့ဆောင့်အားကိုလျှော့ကာ လီးကိုတစ်ဝက်လောက်သာ ထုတ်၍ ခပ်ဖြေးဖြေးတစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးသည်။ မချိုတစ်ယောက် ကြေးစားထံမှရသော ကာမအရသာကို ခုံမင်စွဲလမ်း သွားပေပြီ။ ပြီးတော့ အလိုးကောင်းသော ဇော်ဇော်ဆိုသော ကောင်လေးကိုလည်း ခင်တွယ်သွားမိသည်။ “ တော်ပြီဇော်…ရပြီ ” သူမစကားအဆုံး ဇော်ဇော်က လီးကိုနောက်သို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲထုတ်ကာ သေချာနမ်းပေးသည်။
တို့ခဏနားပြီး တစ်ချီထပ်လုပ်ကြတာပေါ့ “ဟုတ်ကဲ့…မမ” ဇော်ဇော်က ပြောပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် အိပ်ခန်းနှင့် ဆက်လျှက်ရှိသော ရေချိုးခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ မချိုကတော့ နောက်ပြီးတော့မှပဲ ရေဆေးတော့မည်ဟု တွေးလျှက် အိပ်ယာထက်တွင်လှဲ၍ ကျန်နေခဲ့လေသည်။ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ တယောက် ထိုနေရာ ထိုဌာနသို့ တပတ်လျှင် တခါရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမရောက်တိုင်း ဇော်ဇော်ကို တွေ့ရသည်မဟုတ်။ ရှိတဲ့သူနဲ့ဘဲ သွားခဲ့သည်။ ဇော်ဇော်နှင့်တော့ နောက်ထပ် နှစ်ကြိမ်လောက် သွားဖြစ်ခြဲ့ပီး နောက်ပိုင်းတွင် ဇော်ဇော်ကို မတွေ့ရတော့ပေ။ မေးမြန်းကြည့်တော့ ကုမ္ပဏီတခုတွင် အလုပ်ဝင်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရ၏။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ၏ စိတ်ထဲ တွင်တော့ ဇော်ဇော်ဆိုသော ကောင်လေးကို မကြာခဏတမ်းတ နေမိခဲ့တာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်တော့သည်။ ရေစက်ရေမွှားများ တဖွားဖွားလွှင့်တက်အောင် လက်နှစ်ဖက်ကို အားနှင့်မာန်ဖြင့် လှုပ်ရှားကူးခတ်ရင်း။
ဖွေးဖြူ သော ခြေထောက်လေး နှစ်ဖက်က ဘယ်ညာခွဲ၍ ထားကာ လှုပ်ရှားနေသည်။ အပြာရောင်သန်းနေသော ရေတွင် အဖြူရောင် ပန်းပွင့်လေး လူးလှိမ့်နေသည့်သဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ ဖွားကနဲ တက်သွားသော ရေစက်ရေမွှာများနှင့် အတူ အဖြူရောင် ပန်းပွင့်လေးက ကန်ဘောင်သို့ တက်သောလှေခါး လက်ရမ်းကို ကိုင်ကာ တဖြေးဖြေး လှေခါးထစ်များကို နင်းရင်း ရေကူးကန်ဘောင်ပေါ်သို့ တက်လာသည်။ ပျိုမြစ်နုနယ်သော မိန်းခလေးတယောက် ဝတ်ထားသော ရေကူးဝတ်စုံက ကြည်ပြာရောင်လေး သူမ၏ ဝင်း ဝါသော အသားအရေနှင့် လိုက်ဖတ်လှသည်။ တကိုယ်လုံးတွင် တင်ကျန်နေသော ရေစက်ရေပေါက်လေးများက နံနက်ခင်း နေရောင်ခြည်အောက်တွင် သူမ၏ ဝါရွှေသော အသားအရည်လေးနှင့် လိုက်ဖက်စွာ တန်ဆာဆင်နေကြ သည်။ ရေကူးကန်ဘောင်ပေါ်သို့ ရောက်လာသော မိန်းခလေးက သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ရေစက်ရေပေါက်များကို လက်ဖြင့် သပ်ချနေသည်။
ဒရင်းဘတ်ပေါ်တွင် ထိုင်၍ မဂ္ဂဇင်းဖတ်နေသော ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူက လက်ထဲတွင် စာအုပ် ကို ပိတ်၍ ဘေးရှိစားပွဲလေးပေါ် တင်လိုက်ပြီး သမီးဖြစ်သူ မိုးသန္တာမြင့်ကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သည်။ သမီးလေး အတော်ထွားပြီး လှလာတာဘဲ။ အင်းလေ သူ့အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီးပြီဘဲ။ ငါတောင်မှ အသက် ၄၀ ထဲဝင်နေပြီ။ သမီးကိုယ်လုံးက ငါငယ်ငယ် တုံးကလိုဘဲ အချိုးကျပြီး လှတာဘဲ။ မျက်နှာက သူအဖေနဲက ဆင်တော့ နှာခေါင်းက ပိုလှတာပေ့ါ… အတွေးအဆုံး သူမ၏ရှေ့ဖက်သို့ ဖြစ်၍လျှောက်လာသော သမီးဖြစ်သူက လှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြသည်။ “ မာမီ ဘာကြည့်……’’ “ သမီးလေးကို လှလို့ကြည့်နေတာ… ’’ “ ဟုတ်ပါဘူးနော် သမီးက မာမီလောက် မလှပါဘူး ’’ “ သမီးက ပိုလှပါတယ်ကွယ် .. ကဲကဲ..အဝတ်လဲချည်… အအေးမိအုံးမယ်… ’’ သမီးဖြစ်သူ လျှောက်သွားသောနောက်သို့ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူတယောက် မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို ကောက်ယူ၍ လိုက် လာခဲ့မိသည်။
ရေကူးကန်ဘေးနားတွင့် လုပ်ထားသော အဝတ်အစားလဲသည့် နေရာအဆောက်အဦးလေးကို တံခါး မပိတ်ဘဲ မိုးသန္တာမြင့် အဝတ်အစား လဲနေသည်။ ရေကူးကန်က ကိုယ့်ခြံထဲ ကိုယ်အိမ်ရှေ့က ကန်၊ ပြီးတော့ ဒီမှာက မာမီနှင့်သူ နှစ်ယောက်ထဲ။ ဒီတော့ တံခါးကို မပိတ်တော့ပေ။ သမီး အဝတ်အစား လဲနေသည်ကို တံခါးဝမှရပ်၍ ကြည့်နေမိသည်။ “ လှလိုက်တဲ့ သမီးလေးရယ် ’’ “ ဟင်…..’’ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ ခေါင်းနပမ်း ကြီးသွားသည်။ တကိုယ်လုံးချွတ်၍ အဝတ်အစားလဲနေသာ သမီး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ လုံးလုံးကျစ်ကျစ် လက်သီးဆုပ်မျှ နို့လေးနှစ်လုံး ထိုနို့လေးများထိပ်မှ နို့သီးလေးများ ရှိသင့်သည်ထက် ပို၍ကြီးနေ သည်။ သူမသမီးကို နေ့စဉ်လို သတိထားကြည့်မိသည့်ကြားက သည်နို့သီးလေးနှစ်လုံးက မျက်စိရှေ့တွင် တဖြေးဖြေး ကြီးလာသည်။ သူ့ဘာသာဘဲ ကိုင်လို့လား… ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားလေး တယောက်ယောက်နဲ့ဘဲ…. “ အင်းလေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သမီးက ငယ်သေးတာမှာ မဟုတ်ဘဲ… ဘွဲ့ရလို့ အလုပ်တောင် ဝင်နေပြီဘဲ။
ဒါပေမဲ့ မမှားတန်တာ မမှားရအောင် တနေ့လောက်တော့ ပြောထားအုံးမှဘဲ ’’ ဟု တွေးရင်း သူမတို့နှစ်ထပ်တိုက် ကြီးရှိရာသို့ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ တယောက် ဆက်၍ လျှောက်လာခဲ့ လေတော့သည်။ ကုန်းထားတော ဖင်ကြီးနှစ်လုံးက သာမန်အနေအထားမဟုတ်ဘဲ ကော့တင်းထားသဖြင့် ပို၍ စွဲမက်စရာ ကောင်းနေသည်။ နောက်သို့ ပြူးထွက်နေသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားတွင် တိုးဝင်ညှပ်နေသော လီး တန်းကြီးက ဆက်၍သွင်းလျှင် ရပါလျှက်ဖြင့် မသွင်းဘဲ ဒစ်သာသာ လက်တလုံးမျှဖြင့် စောက်ခေါင်းဝတွင် နဲ့နေပြီး လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကုန်းထား၍ အောက်သို့ ငိုက်ကျနေသော နို့နှစ်လုံးကို လှမ်းဆွဲကာ နို့သီးလေးတွေကို လက်ညှိုး လက်မတို့ဖြင့် ပွတ်နေသည်။ “ အောင်…လုပ်မှာဖြင့် လုပ်ကွာ.. မနေတတ်တော့ဘူး…. ’’ စိတ်မရှည်စွာ ပြောလိုက်သော်လည်း အသံလေးက တုန်တုန်ယင်ယင်လေး ဖြစ်နေသည်။ စောက်ခေါင်းဝတွင် နှဲ့နေသည့် လီးဒစ်ကြီး၏ ဒါဏ်နှင့်။
အချေခံနေရသော နို့သီးနှစ်လုံး၏ ရသတို့ပါ ပေါင်းစပ်လျှက် တကိုယ်လုံးမှ အသွေးအသားတို့က မခံမရပ်နိုင်စွာ လှုပ်ရှားခံစားလျှက် စောက်ရည်ကြည်တို့ကို အတင်းညှစ်ထုတ်ပေးနေသည်။ စောက်ခေါင်းဝတွင် စိုသထက် စိုလာသည်ကို ဒစ်ကြီးက သိနေသည်။ “ မိုး ကလဲကွာ… အောင်က မိုးကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေတာ… စိတ်ရှည်မှပေါ့…” “ကျွတ်..လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့ကွာ…ကဲကဲ…” မိုးသန္တာမြင့် စိတ်မရှည်နိုင်တော့ဘဲ ကုန်း၍ကော့တင်ထားသော သူမ၏ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ပစ်ပစ်ပြီး ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ နောက်ကနေ ဆောင့်သွင်းသလောက်တော့ လီးကမဝင်။ တဝက်သာသာ လောက်ထိတော့ လီးကြီးက စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်သွားသဖြင့် မိုးသန္တာမြင့် နဲနဲတော့ ကျေနပ်သွားသည်။ ကောင်မလေး ဒီလိုဖြစ် ဒီလို လုပ်အောင် တမင်လုပ်နေသော အောင်ကိုမင်းကလည်း စိတ်ထဲကျေနပ်သွားပြီး သူ့လက်တဖက်ကို နို့အုံမှ ဖယ်ကာ ခါးသေးသေးကလေးကို လက်တဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ရင်း လီးကိုဖိ၍ သွင်းလိုက်သည်။
မိုးသန္တာမြင့် ခေါင်းလေး ကော့တတ်သွားသည်။ “ မရပ်…မရပ်နဲ့တော့….ဆက်တိုက်လုပ်… ” စောက်ခေါင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ မဆန့်မပြဲ ဝင်နေသော အောင်ကိုမင်း၏ လီးကြီးက သွက်သွက်ကြီး ဝင် လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်။ လီးက ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လိုးဝင်ခြင်းမဟုတ်။ လီးထိပ်ကြီးက စောက်ခေါင်း ပတ်လည် အရပ်လေးမျက်နှာကို တလှည့်စီထိုးဆောင့် လိုးဝင်နေသည်။ မိုးသန္တာမြင့် မျက်စိနှစ်လုံးကို စုံမှိတ်ကာ ထိတွေ့မှု အာရုံကိုသာ ခံစားလျှက် ခံစားချက် ပြင်းထန်ရမှုကြောင့် မချိတင်ကဲဖြင့် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကို တင်းတင်းစေ့ကာ မာန်တင်းထားရသည်။ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း တလှုပ်လှုပ် ခါဆင်းသွားသော တင်သားလုံးလုံး ကြီးတွေကို ကြည့်ရင်း မချင့်မရဲဖြင့် အောင်ကိုမင်းက တင်သားကြီးတွေကို လက်ဖြင့် ခပ်ဆတ်ဆတ် ရိုက်ပုတ်ဖြစ်ညှစ် ဆုတ်နယ်လိုက်သေးသည်။ ရှေ့မှ နို့နှစ်လုံးကိုလည်း အလွတ်မပေး။ ပြီးတော့ သူ့လက်ဖဝါးဖြင့် ပြန့်ပြူးပြည့်တင်းသော ကျောသားဖွေးဖွေးလေးကို စုံဆန်ကာ ပွတ်ပေးလိုက်သေးသည်။
မိုးသန္တာမြင့် ရှေ့တွင်ထောက်ထားသော လက်နှစ်ဖက်က ညွတ်၍ကျလာပြီး တံတောင်ဆစ်ကို အားပြု၍ ထောက်လိုက်ရသည်။ သည်အခါမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက နိမ့်ဆင်းသွားခြင်းကြောင့် ဖင်ကြီးကပို၍ ကားစွင့် မြှောက်တက်သွားသဖြင့် အားပိုတက်ကာ ဆောင့်အားက ပိုကောင်းလာသည်။ မတရား ထွက်လာသော စောက်ရည် များကြောင့် လီးဝင်လီးထွက် အပြွတ်ပြွတ် မြည်သံနှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု တင်းတင်းစေ့ထားသော မိုးသန္တာမြင့်၏ လည်းချောင်းထဲမှ ထွက်လာသော တအင်းအင်းဖြင့် ကြိတ်ညီးသံတို့က လွှမ်းမိုး၍နေသည်။ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လှသလို မိုးသန္တာမြင့်ကလည်း သူမ၏ဖင်ကြီးကို တောင့်တောင့်ပြီးခံသည်။ အောင်ကိုမင်းနှင့် မိုးသန္တာမြင့်တို့က တက္ကသိုလ်မှာထဲက ချစ်သူတွေ။ အခုသူတို့ကျောင်းပြီးလို့ နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်ဝင်နေကြပြီ။ ခုလိုမျိုး ဆုံကြတာကတော့ ဒီတခါနှင့်မှ ၄ ကြိမ်ဘဲ ရှိသေးသည်။ နေရာကတော့ အောင်ကိုမင်း၏ သူငယ်ချင်းအိမ်တွင် ဖြစ်သည်။
အင်း..ဟင်း.အာ..ဟား…လုပ်…လုပ်..ဆောင့်.အ.. မိုးသန္တာမြင့်၏ ကိုယ်လုံးလေးတခုလုံး တုံတုံရင်ရင် ဖြစ်လာချေပြီ။ အောင်ကိုမင်း၏ လီးကြီးမှာလည်း ဆိမ့် တက်လာပြီး ဆောင့်ချက်များက အနည်းငယ်မျှ အားပျော့သွားသည်။ ကောင်မလေး ပြီးချင်နေပြီ။ အောင်ကိုမင်း အံကိုကြိတ်၍ ဆောင့်အားကိုမြင့်ကာ အကြမ်းဆုံး လိုးဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ “ အ..အီး…အီး…ဟင်း…. ” ကြိတ်၍ညီးရင်း ဖင်ကြီး တဆတ်ဆတ်ခါယမ်း၍ ရှေ့သို့ မှောက်ကျသွားသဖြင့် အောင်ကိုမင်းက သူမ၏ခါးကို အတင်းဆွဲကာ လေးငါးချက်မျှ အားကုန်ဆောင့်ပစ်လိုက်ပြီး သုတ်ရည်တို့ကို ပန်းထုတ်ပစ်ရင်း သူမခါးကို ဆွဲထိမ်း ထားသော လက်ကိုဖယ်ကာ ကိုယ်လုံးကို အသာလှမ်း၍ ဖက်လိုက်ရင် ဝမ်းလျားမှောက်ကျသွားသော မိုးသန္တာမြင့်၏ ကျောပေါ်တွင် မှောက်ရက်သား ပါသွားလေတော့သည်။ “ မာမီကိုသမီးတခု ပြောချင်လို့ ” “ ပြောလေ သမီးရာ…အမလေး…စကားတွေဘာတွေ ခံနေရသေးတယ် ”။
ဟို…လေ.. သမီး..လက်ထပ်ချင်ပြီ… ဘာ..ဘာရယ်…လက်..လက်ထပ်မယ်..ဟုတ်လား ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ အလန့်တကြား အံ့သြသွားသည်။ “ သမီးစကားပြော လောသွားလို့ပါ…. သမီးမှာ ကျောင်းတုံးထဲက ချစ်သူရှိတယ်မာမီ…ခုဆို ၄ နှစ်လောက် ရှိပြီပေ့ါ… အဲဒါ သူက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလို့… မာမီကို ဖွင့်ပြောပြီး ခွင့်တောင်းတာပါ…” မိုးသန္တာမြင့် ခုလိုရှင်းပြလိုက်မှာ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ ဇာတ်ရည်လည်သွားသည်။ “ သူက ဘယ်သူလဲသမီး… မိဘတွေက ဘယ်သူလည်း…ဘာလုပ်လဲ.. ” “ သူ့နာမည်က အောင်ကိုမင်းတဲ့ သူက စီးပွားရေးမဟာဘွဲ့ကိုရထားတာ…အခုဌာနမှာ လုပ်ရင်း Ph.D တက် ဖို့ လုပ်နေတယ်… မိဘတွေကတော့ သူငယ်ငယ်တုံးထဲက မရှိတော့ဘူ…..” “ အို….ဖြစ်ရလေ… ” “ သူက ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ပြီး ဒီအခြေအနေရောက်အောင် သူ့ခြေထောက်ပေါ် သူရပ်ခဲ့တာဘဲ… ” “ လူတော်လေး တယောက်လို့ ဆိုရမှာပေါ့…အင်းလေ…သူနဲ့မာမီကို တွေ့ပေးပါအုံး…စကားစမြည်ပြောရင်း အကဲခတ်ကြည့်အုံးမယ်…။
ဟုတ်ကဲ့ မာမီ…မနက်ဖြန် သမီးခေါ်ခဲ့ပါ့မယ်…မနက်ဖြန်ဆိုတော့ ကုမ္ပဏီရုံးပိတ်တာဘဲ… မာမီအားတယ်…အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပေ့ါ… “ ဟုတ်ကဲ့ မာမီ ” မိုးသန္တာမြင့်၏ မျက်နှာလေး ဝင်းပသွားတော့သည်။ အိမ်ရှေ့မှ ကားရပ်သံကြားလိုက်ရကထဲက သမီးဖြစ်သူ မိုးသန္တာမြင့် ပြန်လာပြီဆိုတာ သိလိုက်ရသည့်နည်းတူ သမီး၏ချစ်သူ အောင်ကိုမင်းဆိုသော ကောင်လေးလည်း ပါလာပြီဆိုတာ အတတ်သိလိုက်သည်။ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ တယောက် အပေါ်ထပ်ရှိ စာကြည့်ခန်းထဲတွင်ရောက်နေသည်။ အောက်ထပ်သို့ ဆင်းမည်ပြုပြီးမှ မဆင်းတော့ဘဲနေလိုက်သည်။ သမီးတွင်သော့ပိုရှိသည်။ ဖွင့်၍ သူတို့ဝင်လာကြ လိမ့်မည်။ မကြာလိုက် သမီးဖြစ်သူ မိုးသန္တာမြင့် သူမရှေ့သို့ ရောက်လာသည်။ “ မာမီ…သူပါလာပြီ… အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ခိုင်းထားတယ်…” “ ဒီကိုသာ ခေါ်ခဲ့တော့သမီး…” “ ဟုတ်ကဲ့ ” မိုးသန္တာမြင့် ထွက်သွားပြီး ခဏကြာ အခန်းဝသို့ လူရိပ်ကျလာသဖြင့် ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
ဟင်… ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ သူ၏ ဦးခေါင်းတခုလုံး ခြားရဟတ်လို လည်ပတ်သွားရသည်။ သမီးနှင့် အတူပါလာသော ကောင်လေး ဇော်ဇော်မှ ဇော်ဇော်အစစ်။ ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူကို တွေ့လိုက်ရသော အောင်ကိုမင်းကလည်း ခြေလှမ်းတုံ့၍ ရပ်သွားသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် တယောက်ကို တယောက် ကြောင်၍ ကြည့်နေမိသည်။ “ လာကြလေကွယ်… ” ပျက်နေသော မျက်နှာကိုပြင် အသံကိုထိမ်းပြီး ပြောလိုက်သည်။ စားပွဲရှေ့မှ ကုလားထိုင်တွင်ဝင်၍ ထိုင်လိုက် ကြသည်။ အောင်ကိုမင်း ခေါင်းကိုငုံ့ထားသည်။ “ သမီး… မာမီ သူနဲ့ နှစ်ယောက်ချင်း စကားပြောချင်တယ်.. သမီးအောက်ထပ်မှာ ခဏဆင်းနေ..မာမီဘဲလ်နဲ့ ခေါ်လိုက်မှ တက်လာခဲ့…” မိုးသန္တာမြင့် ခေါင်းငြိမ့်ပြ၍ ထွက်သွားသည်။ လှေခါးကို ဆင်းသွားသော ခြေသံကြားလိုက်တော့မှ ဒေါ်ချိုချိုမိုး သူ ထုင်ရာမှထာကာ စာကြည့်ခန်းတံခါးကို အတွင်းမှ လော့ချပြီး ပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခေါင်းငုံ့၍ ထိုင်နေသော အောင်ကိုမင်း၏ ဘေးသို့ရပ်လိုက်သည်။
ဇော်ဇော် …..သူမအသံက တုန်ခိုက်နေသည်။ လက်တဖက်က ကောင်လေး၏ ပုခုံးကိုဖက်လိုက်သည်။ သူမအား အောင် ကိုမင်း မော့ကြည့်လာတော့ နဖူးကိုငုံ့၍ နမ်းလိုက်သည်။ “ ဇော်ကို.. မမမျှော်နေတာ ကြာပြီကွယ်… ” “ ကျွန်…ကျွန်တော်နဲ့ မိုးတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို….” ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ၏ လက်က ကောင်လေး၏ ပါးစပ်ကို လှမ်းပိတ်လိုက်သည်။ “ စိတ်ချပါ…ဇော်ရယ်..မမ မကန့်ကွက်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ဇော်က မမကိုလည်း အလှည့်ပေးပေ့ါ… ” ထိုင်နေသော အောင်ကိုမင်းက သူ၏ဘေးတွင် ရပ်နေသော ဒေါ်ချိုချိုမိုးသူ၏ခါးကို ဖက်လိုက်သည်။ “ ထ..ဇော်…မမ မနေနိုင်တော့ဘူး…တချီလောက် မြန်မြန်လေး လုပ်စမ်းကွယ်….” နောက်သို့လှည့်၍ အောင်ကိုမင်းကို ကျောပေးကာ ထဘီကိုခါးအထိ မလိုက်ပြီး ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ လက်ထောက်ကာ ကုန်းလိုက်၏။ ပြူးထွက်လာသော စောက်ပတ်ကြီးက အရည်ကြည်လေးတွေပင် စိမ့်၍ထွက်နေပြီ။ ခံဘူးသော သူကိုတွေ့၍ ခံချင်စိတ်ဖြင့် စိတ်ထလာရသလို လိုးခဲ့ဖူးသော သူကို တွေ့ရ၍ စိတ်ထလာရသော အောင်ကိုမင်း၏ လီးကလည်း စောစောထဲက တောင်နေချေပြီ။ သူမ၏ နောက်သို့ ပုဆိုးကိုချွတ်ကာ တိုးကပ်လိုက်ပြီး လီးကို အရည်ကြည်တို့ ခိုနေရာ စောက်ပတ်သို့တေ့၍ သူမ၏ ပုခုံးကို လှမ်းဆွဲကာ တချက်တည်း ဆောင့်သွင်းလိုက် လေတော့သည် ………… ပြီးပါပြီ။
ညက တညလုံး အိပ်မရတာ အတော်ကို ဆိုးတယ်ရှင်။အိမ်ထောင်သည် ဘဝမို့ အလိုလို တောက်လောင် လာတဲ့ ကာမမီးကို ငြိမ်းမရတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့။ကျမနာမည် ဇာဇာလှိုင်ပါ အသက်က ၃၇ထဲမှာ အိမ်ထောင်ရှိတယ် အိမ်မှာပဲ ကုန်စုံဆိုင် ဖွင့်ထားတာပါ အလှကုန် ပစ္စည်းရော မုန့်မျိုးစုံရော အဝတ်အထည်တွေပါ အစုံရောင်းတယ်။ ကျမယောင်္ကျားက ကိုအောင်ထွေး အသက်က ၄၂ထဲမှာ ကျမထက် ၅နှစ်ထဲ ကြီးပေမယ့် ဆီးချိုဝင်တော့ လူက တဖြည်းဖြည်း ပိန်လာပြီး အားအင်မရှိတော့ သလိုပဲရှင်။မရှက်တမ်းြေ့​​​ပာရရင် ကျမတို့ မလိုးဖြစ်တာ ၆လေ လာက်ရှိပြီ အိမ်ထောင် စကျကတည်းက ကိုထွေးနဲ့ မီးကုန်ရမ်းကုန် လိုးခဲ့တဲ့ကျမ ညဘက်ဆို သွေးသားဆန္ဒက တောင်းတော့တာပဲ။ ကျမက အိမ်မှာပဲ ကုန်စုံဆိုင်လေး ဖွင့်ထားတာပါ။ကိုထွေးက အရင် […]
သဲ ရောက်တော့မယ် ကို က အသာလှုပ်နှိုးတော့မှ မိမိ ခါးလေး မတ်လိုက်သည်။အပြင်ဘက် ကြည့်မိတော့ တရိပ် ရိပ်ပြေးနေသော သစ်ပင် တောင်ကုန်းများကို တွေ့နေရသည်။ ”အင်း” ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင် ကိုသပ် တွန့်နေသော အင်္ကျီကို အသာဆွဲချလို့ မိမိတို့ နှစ်ယောက်အပေါ် ခြုံထားသော စောင် ကိုလည်း ဆွဲဖယ်ခေါက်သိမ်းသည်။ ”ကို ညက အရမ်းဆိုးတာပဲ””သဲ ကလည်းကွာ ချစ်လို့ပေါ့”ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ်က မိမိပါးလေးကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းသည်။ ”တော်ပါ”ချောင်းသာသို့ ရောက်ခါနီးလို့ လမ်းတွေက အကွေ့အကောက် ပိုများလာသည်ထင်သည်။ ကားကြီးက လှုပ်ရမ်းနေသည်။မိမိတို့ ရှေ့ခုံက လင်မယားနှစ်ယောက်တော့ အိပ်ပျော်နေသေးလားမသိ။တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်။ ”ဟိုနှစ်ယောက်တော့ အိပ် ကောင်းနေတယ် ထင်တယ် ကို ဟင်း ဟင်း” ”အိမ်မှာ […]
ကျော်ထက်တစ်ယောက် သူဇာ နဲ့ ခိုင်သူ ညီမနှစ်ယောက်အလာကို ကျောင်းစာကြည့်တိုက်အရှေ့မှ စောင့်နေသည်။ ကျော်ထက်သည် ထိုညီမနှစ်ယောက်ထဲမှ အကြီးဖြစ်သူ သူဇာကိုချစ်ခွင့်ပန်ထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဇာသည် ကျောင်းတွင်း Missပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူဇာသည် ယောက်ျားလေးတိုင်း ငေးရသောသူ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သူဇာသည် အရမ်းလှသလောက်အရမ်းမာနကြီးသူ တစ်ယောက်လဲဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသူတစ်ယောက်ကိုမှ ကျော်ထက်ဆိုသည့် ကောင်လေးက အရမ်းစွဲလမ်းကာ ချစ်မိနေတော့သည်။ ကျော်ထက်စောင့်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ သူဇာ သည် ခိုင်သူနှင့်ရဲဇော်တို့ အတွဲဘေးမှလမ်းလျောက်ကာ လာနေသည်။ ကျော်ထက်လဲ သူဇာနားသို့အပြေသွားကာ ပြုံးပြပြီးသူဇာဘေးမှကပ်လိုက်လာသည်။ “သူဇာ ကျွန်တော်သူဇာနဲ့ စကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်တယ် ခွင့်ပြုပါလားဟင်” “ကျမရှင်နဲ့ပြောစရာ စကားမရှိဘူး ရှင်ကျမကိုမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ကျမစာကြည့်တိုက်ထဲမှာ စာဖက်စရာရှိတေးတယ် ကျမ မအားဘူး” “ဟာမမကလဲ ကိုကျော်ထက်ကိုအားနာစရာကြီး မမလဲတစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ရမှာကို ကိုကျော်ထက်ရှိတော့ အဖော်ရတာပေါ့မမကလဲ” “ဟုတ်သားပဲ […]